Nagarik News - सिएको बजार माग बढ्दाे छ
सिएको बजार माग बढ्दाे छ
लेखापरीक्षणको काम गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) पेसगत शिक्षा हो। सिए पढेकाले मुख्यतः लेखापरीक्षण गर्न सक्छन्। सिएमा लेखा, वित्तीय शास्त्र, व्यवस्थापन, कर, व्यापार कानुनलगायत विषय पढाइने भएकाले उत्तीर्ण जनशक्तिले परामर्शदाताको रूपमा पनि काम गर्नसक्छ। नेपालमा सिए शिक्षामा विद्यार्थीको बढ्दो आकर्षणसँगै यसको व्यवस्थापनमा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । त्यसैले बेलाबेलामा विभिन्नखाले प्रश्न उठ्छन् । सिए शिक्षाको अवस्था, यसका चुनौती र सम्भावनाबारे नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का कार्यकारी निर्देशक सिए विनयप्रकाश श्रेष्ठसँग नागरिकका लागि रुबी रौनियारले गरेको कुराकानीः
आइक्यान किन स्थापना भयो ? र यसले के, के काम गर्छ ?
राष्ट्रको आर्थिक विकासमा लेखाको महत्व हुन्छ । लेखा व्यवसायीले आर्थिक नियमनमा भूमिका खेल्छन् । आइक्यान लेखा नियमनकारी संस्था हो । सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जनचेतना जगाउने, लेखा व्यवसाय सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०५३ सालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था ऐनअन्तर्गत आइक्यान स्थापना भएको हो । यो एउटा स्वायत्त नियमनकारी संस्था हो ।
आइक्यानले लेखाव्यवसाय एवं लेखाको महत्वप्रति लेखाव्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराएर लेखाव्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्वद्र्धनमा भूमिका निर्वाह गर्छ । आइक्यानले नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसम्बन्धी शिक्षा सञ्चालन गर्छ । परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पास गरेकालाई प्रमाणपत्र दिने, सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गर्न अनुमति दिने, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिनेलगायत काम पनि यसले गर्छ । हालसम्म देशभर १५ वटा शिक्षण संस्थाले आइक्यानसँग सम्बन्धन लिएका छन् भने सञ्चालनमा भने ८ वटा संस्थामात्र छन् ।
आइक्यानले अहिलेसम्म गरेका काम संक्षेपमा बताइदिनुस न ?
सन् १९९८ मा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिएको छ । साउथ एसिया फेड्रेसन अफ एकाउन्टेन्सी (साफाको सदस्यता लिएको छ । यसले सन् २००० बाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेको हो । २००३ देखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढाउन थालेकोमा हालसम्म २ सय ८७ जना उत्पादन गर्न सफल भएको छ ।
त्यस्तै सन् २००३ देखि लेखामान र लेखा परीक्षणमान कार्यान्वयन गरी हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय प्रतिवेदनमान तथा लेखा परीक्षणमान तयार गरी व्यवहारमा ल्याइएको छ । सन् २०१६ सिपिए अस्ट्रेलियासँग एउटा सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतापछि यस संस्थाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीले सिपिए अस्ट्रेलियाको सदस्यता लिन सक्छन् । आइक्यानले नेपाल सरकारलाई अर्थनीति, कर तथा अन्य नीतिगत परामर्श दिने काम पनि गर्दै आएको छ ।
नेपालमा सिए पढाइ अवस्था कस्तो छ ?
चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी व्यावसायिक शिक्षा हो । दूरशिक्षा पद्धतिबाट पनि यो शिक्षा पढ्न सकिन्छ । सिए अध्ययनमा प्राविधिकसँगै व्यावहारिक ज्ञान हासिल हुन्छ । त्यही भएर सिए अध्ययन गरेका विद्यार्थीमा अन्य व्यवस्थापनका विद्यार्थीको तुलनामा विश्लेषण क्षमता उच्च हुन्छ । । विद्यार्थी सिए उत्तीर्ण हुनासाथ प्रमुख जिम्मेवारी लिएर काम गर्नसक्ने हुन्छन् । बर्षेनि हजार विद्यार्थी सिए अध्ययन गर्न भर्ना हुन्छन् । समग्रमा सिए अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको करिअर सुरक्षित हुने भएकाले यसप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
सकेसम्म नेपालमै सिए अध्ययन गर्नु राम्रो देखिएको छ । किनभने विदेशमा सिए अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएपछि पुन नेपालमा आइक्यानले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्छ । त्यसपछिमात्र काम गर्न अनुमति पाइन्छ ।
सिएहरूको बजार माग कस्तो छ ?
निजी क्षेत्रमा सिएको माग अत्यधिक छ । त्यस्तै सरकारी एवं आर्थिक सरोकार राख्ने संस्थामा पनि सिएको उपस्थिति देखिएको छ । सिएको कार्यक्षेत्र लेखापरीक्षणमात्र नभई अन्य विभिन्न विधामा जस्तै विजनेस एडभाइजर, इन्टरनल अडिट, ट्याक्ससेसन, म्यानेजमेन्ट, इनभेस्ट, प्लानिङ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएको हुँदा स्कोप राम्रो छ ।
बजारको आवश्यक्ता तुलनामा सिएको संख्या अतिकम भएकाले यो शिक्षाको भविष्य उज्वल छ । आइक्यानबाट उत्पादित सिएले विदेशी संस्थामा समेत राम्रो आउटपुट दिएको पाइएको छ ।
नेपालमा सिए शिक्षाको गुणस्तरबारे पटकपटक प्रश्न उठ्छ । ठूलो संख्यामा भारतलगायत देशमा नेपाली सिए पढ्न जान्छन् । किन यस्तो ?
हामीले गर्ने अनौपचारिक सर्वेमा नेपालबाट उत्पादित सिए उत्कृष्ट नतिजा दिने वर्गमा पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न कम्पनी तथा अन्य संस्थाले अन्य देशबाट सिए उत्तीर्णभन्दा नेपालबाटै पास गरेका सिए बढी रुचाएको देखिन्छ । यो कार्यक्षमताको आधारमा गरिएको विश्लेषण हो ।
जहाँसम्म भारतलगायत देशमा नेपाली विद्यार्थी सिए पढ्न जाने विषय छ । त्यसको प्रमुख कारण नेपालमा सिए पढाइ हुन्छ भन्ने जानकारी नभएर हो भन्ने मलाई लाग्छ । केही संस्थाले जनमानसमा गलत जानकारी गराउने प्रवृत्तिका कारण पनि विदेश गएर सिए अध्यय गर्ने गरेको मलाई लाग्छ ।
सिए पढ्न भर्ना हुने धेरै हुन्छन् तर कोर्र्स पूरा गर्नेचाहिँ कम हुन्छन् ? किन बीचमै पढाइ छाड्छन् विद्यार्थी ?
बीचैमा पढाइ छाड्नु गलत हो । पढाइभन्दा पनि अन्य व्यक्तिगत कारणले विद्यार्थीले बीचमै छाड्ने गरेको हामी पाउँछौं । अन्य विषयमा भर्ना हुनुअघि प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्छ । तर सिए पढ्न कुनै प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दैन । सिएमा उत्तीर्ण हुन ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ र सबै समूह एकैपटक उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । सिएको पढाइको अन्तिम तहमा पढाइसँगै आर्टिकलसिप तालिम गर्नुपर्छ । आफ्नो पढाइको सबै लगानी विद्यार्थीले यही अवधिमा उठाउन सक्छन् । पढाइमा लगनशील र समयको उचित व्यवस्थापन गरी पढ्न नसक्नेलाई सिए उत्तीर्ण गर्न गाह्रो हुन्छ । सिए पढ्न परिश्रम त गर्नैपर्छ तर यो निकै गाह्रो पनि छैन ।
सिएको अध्ययनमा नीतिगत चुनौतिहरु केके हुन् ?
चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षामा नीतिगतभन्दा पनि व्यक्तिगत चुनौती बढी हुनसक्छ । विद्यार्थी लगनशील र गतिशील हुनुपर्छ । संस्थाको हिसाबले भन्नुपर्दा समयसापेक्ष पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाउन चुनौती देखिएको छ । विद्यार्थी अन्य संकायमा जस्तै चाँडै सफल नहुँदा उनीहरूमा आउने निराशालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती हाम्रा अघि छ । यो शिक्षाबारे बजारमा गलत प्रचार निवारण गर्ननसक्नु र नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायमा आइक्यानको हैसियतबारे जानकारी गराउन नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो । समग्रमा प्राविधिक शिक्षा भएकाले समसामयिक विषयमा पनि जानकार भइरहनुपर्छ ।
सिए पढाइ निकै खर्चिलो हुन्छ भन्छन्, तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
अन्य विषयभन्दा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा खर्च निकै कम छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा अध्ययन सिलसिलामा विद्यार्थीले खर्च होइन उल्टो कमाउने मौका प्राप्त गर्छ ।
सिए पढ्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था कत्तिको छ ?
सिए पढ्न आइक्यानले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जेहेन्दार तथा परिश्रमी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ । यस्तो छात्रवृत्ति आवश्यकता हेरी ५० देखि शतप्रतिशतसम्म हरेक तहमा प्रदान गरिँदै आएको छ ।
More in this category: « दुईतीन साता खल्तीमा राजीनामा बोकेँ निर्वाचनबारे आयोगसँग परामर्श गरिएन : इला शर्मा »
निर्वाचनबारे आयोगसँग परामर्श गरिएन : इला शर्मा
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने बताएको छ। उसले कुनै तयारीसहित यो घोषणा गरेको...
लेखापरीक्षणको काम गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) पेसगत शिक्षा हो। सिए पढेकाले मुख्यतः लेखापरीक्षण गर्न सक्छन्। सिएमा...
दुईतीन साता खल्तीमा राजीनामा बोकेँ
केपी अाेली नेतृत्वकाे मन्त्रिपरिषादका सबैभन्दा कान्छा सदस्य विराट विष्ट पार्टीभित्रकाे अान्तरिक विवादका कारण निकालिएका छन्। अध्यक्ष...
'धर्मनिरपेक्षता राख्न पैसाको चलखेल भो'
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला आफूलाई लागेका कुरा नलुकाइ बोल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। खासगरी धर्म...